Rental Mobil Malang di NAYFA Trans - Zia
6 Jan 2017 - 16:47 WIB
Review Dipo Dwijaya S 0 Comments
Rental Mobil Malang di NAYFA Trans Haddii aad weligaa soo kiraysteen baabuur aad u badan tahay in tahay aqoon u leh waxa gurguurta oo ah heerka weyn, in arrin la yaab leh, taas oo lagu eedeeyay lama filaan ah aad ku daray in ay biilka at daqiiqadii ugu danbeysay. Waxaad moodday gaariga u sii socotay inay lacag waxa sheegay website-ka, laakiin waa sheeko kale marka aad hore ilaa counter kirada. The kharashka lama filaan ah ugu weyn tahay noqon doonaa wax soo saarka hoos u xad-dhaaf ah ku bixiyeen hay’adda kirada gaariga sida hab si loo yareeyo aad deyn haddii ay jiraan burbur gaariga. Markaas waxaa jira su’aasha ah haddii aad si dhab ah u baahan tahay.
Waxay noqon kartaa mid adag si ay uga jawaabaan marka ay jiraan safka ah Dedejisanaysaan fasax-sameeyayaal sugaya gadaashiina ah waxaad at counter kirada. Sida abid, dunida caymiska kiro baabuur ah mid qasan, wareer iyo gaad faahfaahinta yar adag. By waqtiga aad ku bixiso si aad u yarayso aad deyn, heerka xayaysiiyo maalin kasta ku dhowaad laba jibbaar kartaan. Si aad u soo kiraystaan ​​baabuur dhaqaalaha asaasiga ah ee Melbourne todobaad ka Avis loo maleeyay waxaad bixinaysaa $ 34,40 maalin, laakiin si loo yareeyo aad xad-dhaaf ah si ay uga $ 3017 ilaa $ 342, doonnaa in aad la slugged la dheeraad ah $ 24 maalintii. Rental Mobil Malang di NAYFA Trans
Waayo, macaamiisha wareertay oo aan rabin in aan la tagay ka dhumey, qiimaha gaariga kaliya ka baxay $ 34 ilaa $ 58 maalin - oo dhan ee ku saabsan laba il warshadaha minutes.One noo sheegay in wax soo saarka hoos u xad-dhaaf ah waa meeshii uu Shirkadaha baabuurta kireeya sameeyaan inta badan ay lacag. Afhayeenka Europcar A beeniyay this, halka afhayeenka Hertz a qiray in “dakhliga amarro” gacan ka celinta waara. Waa maxay habka ugu raqiisan si loo yareeyo xad kiro gaariga?
Warka fiicani waxa weeye waxaa jira siyaabo ka fiican in la yareeyo aad deyn xad ka badan wax soo saarka cadaadis-sale foisted aad on by shirkadaha kiro baabuur. waxyaabaha badan oo caymis kale way ka jaban yihiin oo ay leeyihiin saaris yar. Laakiinse iyagu ma laga yaabaa in sida ku haboon. Haddii aad Doomaha baabuurka kirada, waxaa laga yaabaa inaad bixiso shirkadda kiro daryeelka for magdhow ka dibna iyaga ka caymisku aad dooratay dib sheegan. Waxaan u maleynayaa in ay qiimo yar in ay bixiyaan og waxa aad qaadan hore iyo bixinta lacagta hoose.
TAGS #SewaMobilMalang #RentalMobilMalang #PersewaanMobilMalang